Glenn Close dia handray anjara amin'ny andiany faharoa amin'ny andiany Tehran | Avy amin'ny mac aho
Glenn Close handray anjara amin'ny fizarana faharoa amin'ny andiany Tehran
Iray amin'ireo andiany tsara indrindra Apple TV + efa nisy ary ananana dia ny andiany mpitsikilo Teheran. Miaraka amin'ny adihevitra iray izay efa nanjary trite, ny mpanoratra, mpanoratra, mpamokatra ary indrindra ireo mpihetsiketsika dia nahavita nanome azy ireo rivotra vaovao mahavariana. Amin'ny vanim-potoana faharoa dia hanatevin-daharana ny mpilalao ilay voatendry ho an'ny sarivongana volamena, Glenn Close. Miaraka amin'izay hampiakarana andiany maro ny andiany.
Ilay mpilalao sarimihetsika voatendry ao amin'ny Oscar, Glenn Close, dia nanao sonia andraikitra lehibe amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny Apple TV + mpitsikilo mpitsikilo iraisam-pirenena Tehran. Hilalao an'i Marjan Montazeri, vehivavy anglisy monina any Tehran izy. Hiaka-tsehatra miaraka amin'i Niv Sultan, Shaun Toub, ary Shervin Alenabi izy. Hanatevin-daharana ny sahan'asa andiany izay hanarahana ny tantaran'ny maso ivoho Mossad Tamar Rabinyan, nolalaovan'i Sultan izy, rehefa niditra an-tsokosoko iraka nampidi-doza tao an-drenivohitra Iran.
Araka ny fe-potoana farany, Glenn Close, izay vao notendrena ho Oscar ho an'ny anjara asany amin'ny "Hillbilly Elegy," dia mpankafy ny andiana Apple TV +. Nanomboka tamin'ny Apple TV + ity andiany ity tamin'ny taona 2020. Tamin'ny volana Janoary 2021, nanavao tamin'ny fomba ofisialy ilay mpitsikilo mpitsikilo ho an'ny vanim-potoana faharoa.
Manantena aho fa ho avy tsy ho ela satria isika izay maniry fatratra ny hanaraka ny zava-niainan'ireo mpitsikilo ireo dia te hahita ny vanim-potoana faharoa manomboka izao isika. Mihevitra izahay fa maharitra ela loatra satria tsy nampoizin'izy ireo ny fahombiazan'ity andiany ity. Antenaina fa tsy hiverenan'izany intsony ary amin'ny vanim-potoana fahatelo dia manomboka aloha izy ireo. Tsy mbola re ny zavatra re amin'izao fotoana izao, fa maniry izany isika.
Izay zava-baovao mitranga amin'ity lafiny ity Hotantarainay anao ny momba azy ireo araka ny hitantsika. Ankafizo ny Apple TV + fa mandritra ny fotoana maharitra ny fampiroboroboana maimaim-poana, dia ho hitantsika bebe kokoa izany nihena ho telo volana ankehitriny ny vanimpotoanan'ny fahasoavana nomen'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Glenn Close handray anjara amin'ny fizarana faharoa amin'ny andiany Tehran
Fa maninona no fotsy foana ny headphone an'ny Apple